Xilligii cilmiga beeraha ayaa dhammaad ku dhow, waxaa la joogaa xilligii bayoolajiyada - Nidaamka Baradhada
Maaddaama Yurub ay yareynayso ku tiirsanaanta beeraha kiimikada beeraha 10ka sano ee soo socda iyo wixii ka dambeeya, su'aasha muhiimka ah ayaa ah: Maxaa beddeli doona? Tikniyoolajiyadda beeraha ayaa laga yaabaa inay jawaab ka bixiso, ”ayuu Farhan Mitha ku qoray maqaal uu daabacay Labiotech Insider.
website Wararka Maanta baradhada waxay bixisaa maqaallo ka kooban qoraalkan. Maqaalka oo buuxa waxaa laga akhrisan karaa websaydhka. Labiotech.
Adeegsiga beero-kiimikada - sunta cayayaanka, bacrimiyeyaasha iyo waxyaalaha kiciya kobcinta dhirta - ayaa muhiim u ahaa aadanaha qarnigii la soo dhaafay. Waxay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarka beeraha iyadoo loo eegayo baahiyaha dadka (oo tiradooda ay aad kor ugu kacday) waxayna ka badbaadiyeen balaayiin dad ah gaajo. Si kastaba ha noqotee, saameynta bey'adda ee beero-kiimikada waxay noqotay mid aad u muuqata in la iska indhatiri karo, iyo kiimikooyinka ayaa si isa soo taraysa loogu arkaa aalad qarnigii la soo dhaafay kuwaasoo si liidata ugu habboon xallinta dhibaatooyinka qarniga 21-aad.
Aqoonsiga tan, Midowga Yurub wuxuu dhowaan dejiyay dhowr ah yoolal si uu si weyn hoos ugu dhigo xaddiga kiimikada loo isticmaalo beeraha Yurub illaa sannadka 2030. Waxaan ka hadleynaa 50% yareynta isticmaalka kiimikada iyo sunta khatarta ah, iyo sidoo kale 20% yareynta isticmaalka bacrimiyeyaasha.
Intaa waxaa sii dheer, way iska cadahay in dhaqaajinta hadafyadan aysan ku wehelin hoos u dhac wax soo saar leh. Wadada looga baxo xaalada ayaa ah in loo leexiyo dhanka cilmiga teknolojiyadda beeraha.
Taariikh ahaan, kor u qaadista cilmiga teknolojiyadda beeraha ee Midowga Yurub had iyo goor uma dhicin si habsami leh. Guddiga Yurub wuxuu caqabad ku noqday soo saarista dalagyada hidde ahaan wax laga beddelay, taas oo niyad jab ku keentay shirkado badan oo cilmi baaris ku leh qaaradda oo u tixgeliyay hababka injineeriyada hidaha inay yihiin aalado muhiim u ah soo saarista wax soo saar badan, kalsooni badan leh iyo nidaam waara oo waara beeraha.
Si kastaba ha noqotee, cilmiga bayoolajiga beeraha kaliya maahan abuurista dalagyada GM: saynisyahano ayaa u adeegsada inay abuuraan dhowr xalal bayooloji oo gacan ka geysta hagaajinta habab loogu talagalay dalagyada sii kordhaya (iyada oo aan wax laga beddelin hidaha dhirta laftooda).
Pheromones ee xakamaynta sunta cayayaanka
Kiimikooyinka sunta kiimikada ahi waa aalado adag oo loogu talagalay in lagu xakameeyo cayayaanka, waa “madaafiic culus”, oo loo istcimaalo dil. Laakiin qaabkan "dhulku gubtay", ee la adeegsaday tobanaan sano, wuxuu sababaya dhibaatooyin ba'an xagga deegaanka.
BioPhero, oo ah jaamacad farsamo oo deenish ah, ayaa dhidibada u istcimaashay isticmaalka sunta cayayaanka sida beddel waara oo sunta kiimikada ah. Wax soo saarka shirkadda waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagula dagaallamo aboorka, dhirta oo badankood ay yihiin cayayaanka khatarta u leh dalaga.
Faragalinta 'Pheromone' waxay khalkhal galisaa ragga aboorka iyagoo arooraya meesha dhabta ah ee haweeneyda iyagoo adeegsanaya astaamo u gaar ah. Natiijo ahaan, ukumo yar ayaa la dhigay, iyo tirada dirxiga ee dhaawici kara dalagga waxaa loo hayaa mid hoose, heer aad u badan oo la maareyn karo.
BioPhero waxay sameysay hanaan halsano - oo u dhigma habka soosaarka biirka - halkaasoo khamiista injineernimada ay abuurto pheromones aboor. Tani waxay u oggolaaneysaa soo saarista pheromones qiyaasta warshadaha, taas oo ka dhigaysa qaabkan ilaalinta dalagga waarta dhaqaale ahaan macquul ah.
Sidaad ogtahay, cayayaanka iyo jeermis-yada noolaha waxay ku yimaadaan dhammaan qaababka iyo cabbirkooda, waxayna wakiil ka yihiin boqortooyooyinka kaladuwan: xayawaanka (cayayaanka), fangaska, bakteeriyada. Tani waxay caqabad weyn ku tahay horumarinta qaababka loo adeegsado xakameynta biocontrol-ka kuwaas oo labadaba si aad ah loo bartilmaameedsaday oo ay ula jaan qaadi karaan dhowr nooc oo noocyo kala duwan ah.
Biyololoji (hore u ahaan jiray Agrosavfe), qeyb ka mid ah Machadka Flemish ee Bayoloji, ayaa soo jeedinaya in xalka dhibaatadan uu kujiro mid ka mid dabiiciyada noolaha adduunka: borotiinada.
Shirkadda cilmiga bayoolajiga ee Beljimka, oo la aasaasay 2013, waxay horumarineysaa "agrobels" - borotiinno yaryar oo loogu talagalay in lagula dagaallamo cayayaanka iyo cudurada. Isha dhiirrigelinta abuurista "agrobel" waxay ahayd borotiinka llama, oo lagu kala soocay tayada dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Shirkaddu waxay si dhakhso leh u dooran kartaa borotiinka firfircoon ee firfircoon ee dabiiciga ah ee ka dhanka ah nooc kasta oo cayayaan ah ama cudurada ka dhasha, waxay u soo saaraan tiro ku filan iyada oo loo marayo halbeegga microbial waxayna u beddelaan badeecadaha ilaalinta dhirta ee isticmaale-u-habboon.
Isticmaalka bakteeriyada ciidda
Sanadihii la soo dhaafay, daraasadda cilmi-baarista microbiome ayaa si aad ah u ballaarisay, oo ay fududaysay horumar ballaaran oo laga sameeyay daraasadda saameynta ay ku yeesheen bulshooyinka microbial deggan deegaanka ay ku leeyihiin noolaha martida loo yahay. Mawduucani wuxuu sidoo kale ahaa kan diirada lagu saaray cilmi baarista beeraha, sababta oo ah dhirtu sidoo kale waxay leeyihiin microbiomes.
Waxaa laga yaabaa in shirkadda caanka ku ah cilmiga agrobiotechnikada ee aadka loo yaqaan ee ka shaqeysa sameynta shabakad xiriir symbiotic ah oo ka dhaxaysa dhirta iyo bakteeriyada ay tahay Pivot Bio oo saldhigeedu yahay California. Soosaarka calanka ee shirkadda ayaa ku soo bandhigaya bakteeriyada hidde ahaan wax laga beddelay ciidda, oo ka soo qaadi kara hawada hawada si toos ahna ugu geynaysa dhirta. Sheygu wuxuu yareeyaa ama xitaa bedelayaa baahida loo qabo bacriminta nitrogen synthetic, dalabka kaas oo EU ujeedadeedu tahay in la yareeyo 20%.
Dhowr shirkadood oo Yurub ah oo bayoolaji ah (oo ay ku jiraan Xtrem Biotech oo ku taal Spain iyo ApheaBio oo ku taal Belgium) ayaa sidoo kale baaraya suurtagalnimada isticmaalka microbes si loogu beddelo agrochemicals. Si kastaba ha noqotee, hordhaca guuleysta ee microbes faa'iido leh ee ciidda xaaladaha dhabta ah ee goobta ayaa cadeeyay inay tahay mid caqabad ku ah, maaddaama arrimaha deegaanka ay inta badan caqabad ku yihiin waxtarkooda iyo xasilloonidooda.
Si looga adkaado xaddidan, shirkadda Faransiiska ee Kapsera waxay sameysay microcapsules yar-yar oo biodegradable ah oo alginate ah (walax laga soo saaray algae) oo hagaajin doonta gaarsiinta iyo waxqabadka bacriminta bio-kiimikada iyo cilladaha dhirta.
Caqabadda hor taal beeralayda Yurub marka la eego himilooyinka cusub ee EU waa mid aad u adag: in la sii wado kordhinta wax soo saarka iyadoo la yareynayo adeegsiga kiimikada. Waxay umuuqataa mid aan la qaadan karin, laakiin arimo badan oo xalalka bayoolojiga ah ayaa cadeynaya inaysan taasi ahayn. Oo la siiyo xaqiiqda ah in warshadaha cilmiga bayoolajiga beeraha EU ee sannadka 2019 ay heleen 245 milyan oo yuuro oo loogu talagalay horumarinta (21% in ka badan 2018), kacaanka cusub ee beeraha ayaa laga yaabaa inuu ka dhowdahay sida aan u maleyno.
Tags: cilmiga bayoolaji ee beerahakacaanka beeraha cusubdiidmada agrochemicals